အချစ်စစ်ဆိုတာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အချစ်စစ်ဆိုတာ
Posted by Yin Nyine Nway on Jul 26, 2010 in News |5comments
ဇာတ်လမ်းလေးထဲက အဖိုးအိုရဲ့အချစ်ကို ဦးညွှတ်လိုက်ရင်းနဲ့ …စာဖတ်သူများလဲ အချစ်စစ် ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိ နိုင်ကြပါစေနော်….
ကျွပ်တော် ကတော့ အချစ်စစ် ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်း ဘဲလို့ ထင်တယ် မှားကောင်းလဲမှားနိင်တယ်
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့ကို သူ ပြစ်သွားပြီလေ
ဘ၀တူတွေလာဆုံကြတာပေါ့ ghost …. တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်…. ကျွန်တော်လည်း ပေးဆပ်ခြင်းလို့ပဲ အတည်ပြုလိုက်ပြီဗျာ….